HomeWararka CiyaarahaKooxda kubadda cagta Liverpool oo Noqotay Naadiga loogu neceb yahay Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa noqotay naadiga loogu neceb yahay horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, sida ay muujisay codbixin la qaaday oo lagu ogaanayay heerka jacaylka ama nacaybka ee kooxaha 20ka ah ee xilli ciyaareedkan ku jiray horyaalka Premier League.
Horraantii bishan, tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ku dooday in qof walba oo jooga waddanka UK uu doonayo in Liverpool ku guuleysato horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, iyadoo waqtigaas uu u duur-xulayay garsooreyaasha oo uu tibaaxay inay u xaglinayaan dhinaca Merseyside.
“Qof kasta oo waddankan ah waxa uu taageeraa Liverpool, warbaahinta iyo qof kastaaba…” Ayuu yidhi Guardiola kaddib ciyaartii ay kooxdiisu 5-0 ku karbaashtay Newcastle United.
Waxa isaguna aragtidaa ku taageeray tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel oo ka hor finalkii FA Cup ee Sabtidii, waxaanu yidhi: “Boqolkiiba boqol kuma raacsani, laakiin waan arki karayaa in dadku ay u badan yihiin Liverpool. Dadka dalka intooda badan waxay niyadsamaanta siinayaan Liverpool.”
Kaddib doodda labadan tababare, afti laga qaaday taageereyaasha kubadda cagta ayaa waxay sheegtay, in Liverpool ay tahay kooxda loogu neceb yahay naadiyada waaweyn ee horyaalka Premier League.
Waxa kale oo layaab leh, in saddexda kooxood ee Manchester United, Chelsea iyo Arsenal ay iyaguna ku jiraan kooxaha loogu neceb yahay laakiin aanay gaadhsiisnayn heerka Liverpool oo kale.
41.6 boqolkiiba dadkii codkooda dhiibtay ayaa sheegay inay neceb yihiin Liverpool, kuwaas oo tiradoodu ahayd 28,602 qof, halka Manchester United ay noqotay kooxda labaad ee loogu neceb yahay oo 31.1% ay cadkii codeeyey sheegeen inay neceb yihiin, iyadoo Chelsea noqotay naadiga saddexaad oo 14.3% ay dadkii aftida laga qaaday u codeeyeen dhinaca nacaybka.